(၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အားကစားဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး (SOMS - 7) ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့် (၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အားကစားဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး (SOMS - 7) ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel ၌ ကျင်းပသည်။
ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး လုပ်ငန်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စများ ဆွေးနွေး
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနုိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes က ယနေ့တွင် အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ခြောက်လပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ
စစ်တွေ အောက်တိုဘာ ၉
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ခြောက်လပတ်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ ၌ကျင်းပသည်။
တရားမ အထူးအယူခံမှု လေးမှု စီရင်ချက်ချမှတ်၊ ငါးမှုကိုကြားနာ
ဆိပ်ကမ်းများ၌ ကုန်စည်တင် သင်္ဘောများကို မှတ်တမ်း တင်နိုင်မည့် Port EDI စနစ် ယခုလအတွင်း စတင် အသုံးပြုမည်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆိပ်ကမ်းများ၌ ကုန်စည်တင် သင်္ဘောများ၏ အဝင်အထွက်နှင့် အချက် အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည့် Port EDI စနစ်အား ယခုလအတွင်း စတင် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ကျိုက်သလဲ CBT ကျေးရွာသို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ တကသိုလ် ကျောင်းသားများ လာရောက် လည်ပတ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံတေးမြို့နယ်ရှိ ကျိုက်သလဲကျေးရွာ ရပ်ရွာလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း CBT ကျေးရွာသို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ နိုဝင်ဘာ လမှစ၍ သုံးသုတ်ခွဲကာ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက် လည်ပတ်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျိုက်သလဲ CBT ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒါရိုက်တာ ဦးခင်ဇော်ထံမှ သိရသည်။
ရေဆိုးရေညစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် UMFCCI တို့ ပူးပေါင်း၍
ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်ရှိ ရတနာနှင်းဆီ အိမ်ရာတိုက်ခန်းများ ၁၅ နှစ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက် ရောင်းချပေးနေသည့် ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် ရတနာလမ်းမကြီးဘေးရှိ ရတနာနှင်းဆီ အိမ်ရာတိုက်ခန်းများကို ၁၅ နှစ်‌ အရစ်‌ကျ စနစ်‌ဖြင့်‌ ဝယ်‌ယူနိုင်‌ပြီဖြစ်‌‌ကြောင်း မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
Page 2167 of 2280